othomathikhi we-othomathikhi welayisi wokudla imishini ephelele / yomshini womshini we-peeler
lolu chungechunge luqedela okuzenzakalelayo ilayisi yokugaya isitshalo yakhelwe futhi yathuthukiswa kusuka kwizinga eliphakeme lezinto zokusetshenziswa ngokuhambisana namazinga ekhwalithi aphesheya. lesi sitshalo somshini we-paddy irayisi lomshini owaziwa ukusebenza kwesakhiwo se-paddy irayisi, izindleko zokugibela eziphansi, ukulungiswa okuncane, impilo ende yokusebenza nokuqina okuqinisiwe.
isitjalo selayisi yinqubo esiza ekutholeni ama-hull kanye nama-bran kusuka ku-paddy okusanhlamvu ukukhiqiza irayisi ebunjiwe. Inhloso a uhlelo lokugaya irayisi ukususa i-husk kanye nezendlalelo ze-bran kusuka ku-paddy irayisi ukukhiqiza ama-Rayisi ama-irayisi amhlophe akhiqizwe ngokwanele angenakho ukungcola futhi aqukethe inani eliphansi lezinto eziphukile.
Izici zesitshalo sokugaya irayisi
1. lesi sitshalo se-paddy othomathikhi sokwenza irayisi sinezindlela zezimvume zokwenza umshini wokugijima oshelelayo, ukusebenza okulula nokugcinwa kulula kakhulu.
2. lesi sitshalo semishini yokugaya irayisi singanciphisa inkinga yokungcola kothuli ekondleni, ukwenza ngcono indawo esebenza kuyathandeka.
3. umshini wokugaya irayisi unegumbi lokugaya irayisi, umlomo wamamitha wenza intuthuko edingekayo yokwenza, i-cereal bran ngesikhathi somugqa ongaphambili, lokushisa irayisi liphansi, ukuthuthukisa ikhwalithi yelayisi,isithombo selayisi selayisi singanciphisa okuqukethwe kwe-irayisi kanyanisi ocolekileyo kuyinto enhle kakhulu.
Imininingwane yesitshalo sokugaya irayisi
800~ 1000(kg / h)
1 setha indawo yerayisi,1 setha izimbobo zerayisi,1 setha umshini wokuhlukanisa okusanhlamvu ,1 setha umshini wokugaya irayisi ,1 setha umshini we-grader,1 setha ilifti elilodwa ,1 setha ukuphakamisa okuphindwe kabili